Ambongadiny Vacuum cleaner sivana orinasa sy mpamatsy | kejia
Fitaovana fonenana: plastika
Fitaovana sivana: fibre fitaratra
Fahombiazan'ny filtration: 99,95%
Haavo sivana: Hepa
Ny habe azo namboarina
Amin'ny maha elanelan'ny sivana azy, ny singa sivana vovoka dia rohy manan-danja amin'ny fizotran'ny fanadiovana ny fanadio madio. Ny kalitaon'ny singa sivana vovoka dia mamaritra ny vokatry ny sivana amin'ny lafiny lehibe. Ny singa sivana amin'ny fanadiovana banga dia vita amin'ny fitaovana sivana avo lenta sy fitaovana famokarana matihanina. Ny singa sivana dia misy fitaovana isan-karazany ary miavaka manokana. Azo kendrena hihaona amin'ny fampiharana ny sehatra isan-karazany. Rehefa misafidy ny singa sivana amin'ny mpanadio banga isika dia tokony hitandrina ny lamba sivana izay manenjika ny fahombiazan'ny filtration avo lenta, ny fanesorana vovoka mora ary ny vokatra maharitra amin'ny lamba sy ny endrika. Ny lamba sivana dia ahitana indrindra: sivana polyester, sivana polypropylene, sivana nilona ary sivana vinylon.
Ny toetra mampiavaka ny sivana singa amin'ny fanadiovan-drivotra matetika dia tsy mora simba, vokatry ny fanadiovana lavenona miharihary, filtration indroa, fari-pahalalana midadasika sns.
1. Tsy mora simba
Ny singa sivana amin'ny mpanadio banga amin'ny ankapobeny dia tena tsara amin'ny fitaovana, tsy mora simba, miaraka amin'ny fanoherana, ny fanoherana ny fanoherana, ny fanoherana, ny hamandoana, ny toetra malefaka ary tsy manentana, ary azo ampiasaina imbetsaka, tsy misy simba, ka mitondra fiara ny lamba sivana hanana fiainana lava kokoa.
2. Ny vokatry ny fanadiovana lavenona dia manan-danja
Ny vokan'ny fanesorana vovoka amin'ny efijery sivana dia tsara kokoa ihany koa, avo ny famaritana ny filtration, ary potika vovoka marobe no azo sakanana any ivelany, izay afaka manakana ny fihanaky ny bakteria. Izy io koa dia afaka manatsara ny vokatra fanadiovana lavenona ary mampitombo ny androm-piainana.
3. Filtration indroa
Ny filtration indroa koa dia singa iray amin'ny singa sivana amin'ny mpanadio banga. Izy io dia afaka mametaka sy manivana bakteria sy fibre tsy lava sy kely amin'ny lamba tsy tenona, ary avy eo manivana azy amin'ny alàlan'ny teknolojia fanodinana manokana. Ny lavenona sivana roa heny dia afaka manadio ny efitrano amin'ny fomba mahomby kokoa.
4. Halavan'ny fampiharana malalaka
Ny fampiharana ny efijery sivana fanadiovan'ny vovoka dia malalaka ihany koa, ary azo ampiasaina amin'ny fitaovana fanadiovana lavenona mandeha ho azy, toy ny fanarenana vovoka elektrostatika, fanivanana entona avo lenta, fanivanana vovoka, fitsaboana rano, sns.
Teo aloha: Tanan-drano sivana avo lenta sivana
Manaraka: V-karazana sivana haavo avo lenta amin'ny rivotra
Sivana fanadiovana rivotra